Uyilo olwenziweyo lwePvc yeeVenkile zeVenkile kunye neFektri - China Uyilo ngokubanzi lwePvc yeeFilimu zabavelisi
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YSB-81012 3.Product Structure: PVC 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 8000M / Code Wood grain PVC wall panel ifilimu Professional kuzo zonke iintlobo zamakhaya, iivenkile, iivenkile zokutyela, iti, izindlu zeKTV. Kufanelekile ukuvezwa komphezulu webhodi yeenkuni, isilingi eludongeni ngaphezulu, ikholamu esongelweyo, ibhodi enkulu ye-macromolecule, ibhodi yomgca we-engile, ibhodi yefayibha ephakathi, ibhodi yeglasi, ibhodi yekristale, ipleyiti yesinyithi, iprofayile yentsimbi yeplastiki, njl. Umngundo weplastiki ...
1. Ububanzi: 0.64 imitha / 1.26Meters 2. Ikhowudi: YSB-86032 3. Ulwakhiwo lweMveliso: PVC 4. Ukucaciswa: 500M / ROLL 5. MOQ: 8000M / Code 6. Unyango lomphezulu: Embossed 7. Umbala: njengomfanekiso okanye uMthengi Isidingo 8. Ifunyenwe: Zhuji, Zhejiang, China PVC Ibhere ethandekayo yePatheni yokuLaminisha ifilimu 1. Iphepha linokusetyenziswa kwibhodi yeenkuni ezahlukeneyo (iplywood, ibhodi yamasuntswana, ifayibha, ibhodi yeenkuni, njl.) Kunye nezinye izinto (ezinje ngoxinzelelo oluphezulu ibhodi yesamente, ibhodi ye-asbestos, iphepha lesinyithi, iiprofayili zentsimbi kunye neentsimbi, njl.
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YSB-88001 3.Product Structure: PVC 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 8000M / Code YS BRAND PVC Flash Gold Flower Lamination Film 1.Ukukhuselwa kwendalo kunye nokuqina Izinto zodonga oludityanisiweyo sele ligqithile iphepha lodonga kumgangatho nakukhuselo lokusingqongileyo. Ukusukela ekukhuleni okukhawulezayo kokuthengiswa kweewallboard ezidityanisiweyo kule minyaka idlulileyo, siyabona ukuba udonga oluhlanganisiweyo luye lwathandwa ngakumbi nangakumbi ngabathengi .. 2. Emva kokuhanjiswa ...
1. Ububanzi: 1.26Meters 2. Ikhowudi: YSB-92003 3. Ulwakhiwo lweMveliso: PVC 4. Ingcaciso: 500M / ROLL 5. MOQ: 8000M / Code 6. ulwenziwo: Ewe Iyafumaneka kububanzi roll, Ukutyeba kunye nobude 7. Ukutyeba : I-0.12mm / 0.14mm okanye i-Customized 2020 YS PVC ifilimu yokuqhafaza i-thermal yokuhombisa i-wallboard 1. Nge-PVC njengeyona nto iphambili, luhlobo lokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ukucaca kwayo kulunge ngakumbi kunaleyo ye-polyethylene, kodwa mbi ngakumbi kune-polystyrene, kunye nenqanaba elithile le-gloss. 2. P ...
1. Ububanzi: 1.26Meters 2. Ikhowudi: YSB-92010 3. Ulwakhiwo lweMveliso: PVC 4. Ingcaciso: 500M / ROLL 5. MOQ: 8000M / Code 6. Uluhlu lwesicelo: Umgca womnyango, ifenitshala yeofisi, ikhabinethi, iiprofayili zomthi, igumbi lokuhlambela, iidesika zekhompyuter, ibhokisi ye-hifi, igumbi lokuhlamba, njl. 7. Isicelo: umhombiso wasekhaya, umhombiso waseludongeni 8. Uhlobo: Oluqhelekileyo 9. I-OEM: EWE SINAKHO 10 Ixesha lokuGcina: 1-2 unyaka weFektri yaseTshayina ithengise ngokuthe ngqo ifilimu ye-pvc, ifilimu eqikelelweyo 1. Ubunzima bokukhanya, ukufudumeza ubushushu, ulondolozo lobushushu, ukufuma ...